Vaimbove Meya weHarare, VaGomba, Vorara Zvakare muChitokisi paMhosva yeKutyora Chikamu cheMutemo weSarudzo Yavari Kupomerwa
Vaimbove meya veHarare, VaHerbert Gomba
Vaimbove meya weguta reHarare, VaHerbert Gomba, avo vakasungwa neMuvhuro vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu chemutemo wesarudzo muna 2018, vacharara zvakare muchitokisi chemapurisa vakamirira kumiswa pamberi pedare redzimhosva neChitatu.
Gweta riri kumirira VaGomba, VaHarrison Nkomo, vanoti VaGomba vari kupomerwa mhosva yekunyepa pasarudzo dza 2018 kuti vaigara pamba pevabereki vavo kuGlen Norah B muHarare, izvo zvinonzi vakatyora Section 37, Sub-Section 2, Paragraph E yemutemo wesarudzo weElectoral Act.
VaNkomo varambawo mashoko ari kutenderar pamadandemutande ekuti VaGomba vakatochwa vari muhusungwa vakakuwara zvakaipisisa, vachiti manyepo.
Gweta raVaGomba ndiro rakavaperekedza kumapurisa neMuvhuro vachida kunozvichenura mushure mekunge vanzwa kuti vaitsvagwa nemapurisa, asi vakabva vasvikosungwa vachipomerwa mhosva itsva iyi.
VaGomba vainzi vaipomerwa zvakare imwe mhosva yekupisa motokari yenhengo yeMDC-T, VaGilbert Mbwende, asi VaNkomo vanoti VaMbwende vakazofunga kusaenderera mberi nekupomera VaGomba mhosva iyi.
VaGomba vari kupomerwa zvakare imwe mhosva yekuMuvhuro nenyaya iyi.
VaNkomo vanoti kusungwa nekumiswa pamberi pedare kwaVaGomba hakuna maturo uye kwakanangana nezvematongerwo enyika, vachiti izvi hazvisi kuzovatadzisa kukwikwidza musarudzo dzema by-election, idzo dziriko mwedzi uno vachikwikwidza kuve kanzura we wadhi 27, uko vachatashurana naVaJephson Matewe veZanu PF.
Mune imwewo nyaya, vaimbove nhengo dzebhodhi rekambani yemafuta, yePetrotrade, iro rakambomiswa basa svondo rapera negurukota rezvemhando dzemoto, VaSoda Zhemu, vanonzi vari kuipikisa kumbomiswa kwavo basa uku.
Mutsamba yavo kubazi rezvemhando dzemoto, vaive sachigaro vebhodhi iri, Advocate Tinomudaishe Chinyoka, vakati danho rekumbovamisa basa iri rakatorwa senzira yekuda kuvharidzira kuferefeta kwakanga kuchiitwa nebhodhi ravo nyaya dzehuwori hunonzi hakaitika mukambani yePetrotrade apo yaive pasi pebazi iri pasati pave nebhodhi.
Dzimwe nhengo dzebhodhi rakamiswa basa iri dzinoti Amai Zanele Dube, vaive mutevedzeri wasachigaro, Amai Gladys Mumhure, VaSimbabrashe Eric Mhuriro, VaFerida Matambo, Amai Getrude Marabada, VaGodfrey Ncube, VaDakarai Mukuku pamwe naAmai Lilian Timveos.